OnePlus 6T Event ကို ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ကြမလဲ
29 Oct 2018 . 6:09 PM
OnePlus ကတော့ ဒီနေ့ည ၉ နာရီခွဲမှာ OnePlus 6T ကို မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus6ရဲ့နေရာကို အစားထိုးပေးမယ့် ထုတ်ကုန်အဖြစ် 6T က ရောက်လာမှာပါ။ 6T ကိုတော့ Minor Design Change နဲ့ Feature အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလာမယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပြီးသားပါ။ OnePlus ကတော့ Event အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ Video ကိုလည်း Twitter မှာ Share ပေးထားပါသေးတယ်။
OnePlus 6T နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Teaser Video တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Twitter မှာ တင်ထားသလို Facebook မှာလည်း Share ပေးခဲ့ပါတယ်။ Portrait Mode ၊ Night Mode ၊ Display Size နဲ့ Battery ပိုင်းတွေမှာ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကို Teaser တွေထဲမှာ ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ OnePlus 6T မှာ အဓိကပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ နောက်ကျောဖက်က Fingerprint Scanner ကို ဖြုတ်ပစ်ပြီး In Display Fingerprint Scanner ကို ထည့်ပေးလာမှာပါ။ OnePlus ကတော့ အမြန်ဆုံး In Display Fingerprint Scanner ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမျိုးကို ခဏခဏပြောနေပါပြီ။
Are you ready for sharper and more detailed low-light captures? Just5days until the #OnePlus6T. pic.twitter.com/AJcHEORily
— OnePlus (@oneplus) October 24, 2018
OnePlus 6T နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Specification တွေက သတင်းပေါက်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် တကယ်မိတ်ဆက်မှာပဲ အဲ့ဒီသတင်းတွေက ဟုတ်မဟုတ် သိရမှာပါ။ Oxygen OS ကိုလည်း အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာအောင် လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး 6T အတွက် Gesture အသစ်တွေကိုလည်း တွေ့လာရမယ်လို့ OnePlus CEO Pete Lau က Forum မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ OnePlus Event ကိုတော့ New York မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Live-Stream ကို YouTube မှာ ဒီ Link ကနေတဆင့်လွှင့်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Event စမယ့် အချိန်ကတော့ ဒီနေ့ည ၉ နာရီခွဲပါ။
OnePlus 6T Event ကို ဘယျလိုစောငျ့ကွညျ့ကွမလဲ
OnePlus ကတော့ ဒီနညေ့ ၉ နာရီခှဲမှာ OnePlus 6T ကို မိတျဆကျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ OnePlus6ရဲ့နရောကို အစားထိုးပေးမယျ့ ထုတျကုနျအဖွဈ 6T က ရောကျလာမှာပါ။ 6T ကိုတော့ Minor Design Change နဲ့ Feature အသဈတှကေို မိတျဆကျပေးလာမယျလို့ သတငျးထှကျထားပွီးသားပါ။ OnePlus ကတော့ Event အတှကျ ပွငျဆငျနတေဲ့ Video ကိုလညျး Twitter မှာ Share ပေးထားပါသေးတယျ။
OnePlus 6T နဲ့ပတျသကျလို့တော့ Teaser Video တှနေဲ့ ဓာတျပုံတှကေို Twitter မှာ တငျထားသလို Facebook မှာလညျး Share ပေးခဲ့ပါတယျ။ Portrait Mode ၊ Night Mode ၊ Display Size နဲ့ Battery ပိုငျးတှမှော တိုးတကျလာမယျဆိုတာကို Teaser တှထေဲမှာ ပွသှားခဲ့ပါတယျ။ OnePlus 6T မှာ အဓိကပွောငျးလဲမှုအနနေဲ့ နောကျကြောဖကျက Fingerprint Scanner ကို ဖွုတျပဈပွီး In Display Fingerprint Scanner ကို ထညျ့ပေးလာမှာပါ။ OnePlus ကတော့ အမွနျဆုံး In Display Fingerprint Scanner ဖွဈလာမယျဆိုတာမြိုးကို ခဏခဏပွောနပေါပွီ။
OnePlus 6T နဲ့ပတျသကျလို့တော့ Specification တှကေ သတငျးပေါကျထားပွီးဖွဈပမေယျ့ တကယျမိတျဆကျမှာပဲ အဲ့ဒီသတငျးတှကေ ဟုတျမဟုတျ သိရမှာပါ။ Oxygen OS ကိုလညျး အရငျကထကျ ပိုကောငျးလာအောငျ လုပျပေးထားမှာဖွဈပွီး 6T အတှကျ Gesture အသဈတှကေိုလညျး တှလေ့ာရမယျလို့ OnePlus CEO Pete Lau က Forum မှာ ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။ OnePlus Event ကိုတော့ New York မှာ ကငျြးပသှားမှာဖွဈပွီး Live-Stream ကို YouTube မှာ ဒီ Link ကနတေဆငျ့လှငျ့ပေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ Event စမယျ့ အခြိနျကတော့ ဒီနညေ့ ၉ နာရီခှဲပါ။